Zvimwe Zvokudya Zvokudya zveBFF Maggot • Yurie BSF
Pasina Buy Zvokudya
Maggot ndiyo imwe nzira yekupa hove uye huku.
Kuvimbisa zvipfuwo zvako zvebhizimisi zvinoramba zvichikura.
Pasina kutakurwa nekutenga pellets
Nzvimbo yezuva ranhasi BSF Maggot Ranch isina Smell
Unoda kuziva nzvimbo yepedyo muguta rako here?
Sei: Nzvimbo yako yakawanikwa yakawanikwa nehurongwa inoratidzwa nemutsara wematareji emaresi epositi.
Saka tora chete kutsvaga.
Kana iwe uchida nzvimbo yakarurama yakapota, tapota uzadze chinyorwa chisina chinhu chine guta / musha mauri ikozvino.
Zvadaro chovha SEARCH
Mepu dzakarongeka muzvirongwa hazvina kururama nekuda kwekukwanisa kwekambani yekambani.
Kuti udzidzise mabhuku, tapota taura naYurie BSF 0812-2105-2808
Mariki Dzimba Dzakadhura
Kubudisa mauto masema kubhururuka mapuropa kune nyore chaizvo uye zvisingadhuri, tinogona kushandisa marara, doro uye manyowa.
Iyo yakakwana yezvokudya, amino acids uye high protein inobatsira zvikuru mhuka dzakagadzikana dzinokurudzira kukura kwezvipfuwo.
KUKUNDA KWAKASHE KWEZVIMBO Pasina SMELL, Free download yakachengeteka uye yakasununguka. SAFE haisi mumararamiro emunharaunda uye inoita kuti varimi vashandise.
Mazuva ano BSF Maggot asina Bau inotarisira kubudisa maggots kune hove uye huku.
Kuita maggotti akanaka kunofadza, pasina makemikari, pasina zvinodhaka uye pasina kupisa kuitira kuti zvigumisiro zvigone kuwedzerwa.
Yakachengeteka nokuti hairatidzirwe nemhuri uye inofara mukuitakura.
Rambai Mukudziridza Maggots
Maggot zvirimwa zvinogona kushandiswa uye kushandiswa kune maggot paste, pfuti yeupfu uye maggot pellets kana kurarama (magot matsva)
Nenzira iyi unogona kuva nezvipfuwo zvizhinji pasina kutenga zvokudya kubva muchitoro zvakare.
Tora pellets uye zvokudya zvekudya.
Rambai Mushandira yeMaggot
Maggot Marketing? SELL YURIE BSF !!!
Iwe haufaniri kunge uchinetseka pamusoro pekugadzira maggot.
Nokuti Yurie BSF achaitenga.
Ramba neMaggot Marketing
Yurie BSF yakapa Rp100.000.000 zvakanakisisa shamwari shamwari / vanhu vekusimudzira mabhizinesi.
Mari yekubatsira inopiwa kuwedzera simba rekugadzira.
Kubhadhara MUMWE NEMA MAGGOT HERE PFUNGA - HERE RIBA !!!
Rambai Bhizimusi Mikana
AMBASSADOR YURIE BSF akagadzirira kuvapo purazi rako.
AMBASSADOR Yurie BSF anowanikwa pane mamwe maguta e100 kuti ape mazano anobatsira zvakananga pamapurazi avo.
Tarisa 99 Nzvimbo
Pa YURIE BSF UNIVERSITY iwe uchapiwa hukuru hwekudzidzisa.
Kuita kuti chirongwa chemazuva ano cheBFF chisina kunhuhwira maererano neSOP (standard operation procedure) yekurima kweBFF pasina kunhuhwirira.
Yurie BSF University yakaramba
Sewe shamwari ya Yurie BSF, iwe unowanzova nhengo yeKOPERASI MAGGOT INDONESIA.
Iyo yezvigadzirwa zvepamutemo nokuda kwemagetsi kutenga nekutengesa nekumwe hupfumi hwebhizimisi.
Iwe uchanakidzwa nezvikomborero zvekugovera zvakasara zvinowanikwa zvebhizimisi rekushandira pamwe neIndonesian maggot.
Ramba uchiendesa Indonesian Maggot Cooperative
Iva chikamu chemuzinda weYuroe BSF kuti uite pamwe chete nebhizimisi reMaggot mune zvebhizimisi pasi rose.
Iyi danho rinogona kukwanisa kugadziriswa mumakambani uye munyika dzakawanda zvinoda mari.
Iyi purogiramu yeCSR inotarisirwa kune avo vanoda kudzidza, asi havakwanise kutenga bhajiro rezvino re BSF risina kunhuwa
Tanga mabasa ese ezuva nezuva nemunyengetero unobvumirwa kuti uende zuva rose naMwari.
Saka iyi iyi Yurie BSF purogiramu ndiyo MAIN uye NUMBER chimwe chezvirongwa zvebasa.
Tarisa 99 Nzvimbo yeMaggot Ranch
Nei Vachiita Vanomuda Rudo Yurie BSF
Kudzidza kukudziridza maggot pasina kunhuwa kuri nyore kwazvo ne chirongwa chakaedzwa kubudirira.
Nhungamiro yakapiwa yakanga yakakwanisa kusvika pakubudirira kwangu kusanganisira kugamuchira kukohwa kwebhizinesi rangu rebhizimusi
Mbak Yurie kushivirira kwekutungamira ini kunoshamisa, kushanda pahofisi haisi dambudziko nekuti mutariri mukuru murefu
Tarisa 99 Nzvimbo yeMaggot pasina Bau Ranch
Ramba uchidhura mari kutenga pellets, 99% catfish varimi uye vamwe kunze kwebhizimisi nokuti havagoni kuwana mari yakawanda yekudya kusvika ku60-70%, kana iwe uri mutangire mari yekugadzira, kunyanya kudya kunogona kusvika kusvika 80%.
Farira mari yekuchengetedza huku kune huku 82%. Iwe unoita izvi nekuita hukuku hwako hwekudya nemagetsi zvinoshandiswa, zvakadai seupfu hwemaggot kuitira kuti hukuku hwako hukure huwandu. Yenguva yekuchengetedza mari nekuisa pfungwa pakuenderera mberi kuwedzera nhamba yemombe dzako
Ingotarisa nefoni yevhidhiyo tutorial chaiyo yeBBF kukura kunze kwekunhuhwirira.
Rambai Mungaita Sei Majekiti?
Dharirai nzira yekuita nayo
Kuti uwane migumisiro yakawanda kubva kumagetsi e BSF, usati wapiwa sehove uye huku wekukudya, tinokurudzira kuti utange kuitora kuva:
Mutsva / mararamiro anogara
Nzira yekugadzira Maggot nokuda kwekudya kwemhuka
Nzira Dzakakurumidza Kudzidza Kukurudzira Magorots Asingaoneki.
Chimwe chezvipingamupinyi pakubudirira ndeyekunyadzisa kokukumbira, Yurie BSF inopa rubatsiro rwemhando yevashandi, kupindura zvinhu pamusoro pebhizimisi remaggot uye magetsi ekugadzira magog.
Dana zvino zvakare
Munhu wose anoziva nzizi. Izvi zvipembenene zvakatipoteredza. Vanouya nokuti vanonzwa kunobva kunhuhwirira kwezvokudya. Kunze kwezvipukanana izvi zvinovhiringidza, vanotakurawo zvirwere zvehutachiona (tuberculosis), dysenteryamuba, korera uye zvirwere zvakasiyana-siyana.
Kupararira kwechirwere ichi kuburikidza nekudya kunopedzwa nevanhu mushure mokunge uchinge uchinge waputika nhunzi. Asi chaizvoizvo nhunzi dzinounza zvakakosha kune vanhu.
Nzizi dzinomirira chirwere (sub-order cyclorrapha diptera order), morphologically nhunzi dzinobhururuka dzine mapapiro, dzine mapaundi maviri emapapiro ihwoiyo mapapiro epiap seapsang uye maviri mapapiro maduku anoshanda kuti agare akaenzana paanenge achibhururuka.
Dendaase Carrier Flies
Nei mapute anonzi chirwere-kuparadzira zvipembenene? Nokuti kana nhunzi dzichienda panzvimbo ine tsvina, saka nezveA125.000, majirusi achasara paanoenda.
Izvi zvinoitika zvakasikwa nekuda kwenzira yakasiyana yekudya nhunzi. Pavanenge vachienda pane zvokudya, vasati vatanga kudya nhunzi dzinosunungura mvura kubva pamuromo.
Zvirwere zvinoshandiswa se enzyme inobatsira kugadzirisa kudya kwezvokudya. Iri mvura yokurutsira yakasara muzvokudya uye kana ichidyiwa nevanhu inogona kuratidzirwa zvirwere zvakasiyana-siyana.
Zvinhu Zvinokosha Pamusoro Pezizi
Nhunzi dzinouya kumba nokuti dzinonzwa kunotora zvokudya. Kuti uzvibvise, chengetedza zvokudya mumudziyo uko mapute asingagoni kugara.
Kuti uwane zvokudya, nhunzi dziri kushanda masikati. Nyeredzi zvichienderana nerudzi rwayo inogona kubudisa pakati pe 75-126 mazai uye mazinga mukati me 1-4 mazuva.
Biologically, maminetsi e5 achazvidza biologically, uye kana ichidyiwa nevanhu, ichaita kuti pave nehara uye zvichingodaro.
Hupenyu hwehupenyu hunosiyana, pakati pe5 kusvika mumazuva 30. BSF nzizi dzinorarama kwenguva pfupi nepamusoro pe 5-8 pazuva apo hupenyu huri mhuka dzinobhururuka dzinosvika 30 pazuva.
nhunzi dzedenga dzinogona kubhururuka pamhanyire yeAXNXX km neawa, ichi ndicho chinokonzera marara kana zvokudya izvo zvatichangobva kurasa zvichange zvichange zvichisvetuka.
Kunyanya mumamiriro ezvinhu apo mapuranga anokonzera kubereka.
Kubatsira kwezizizi kuvanhu
Chinoshandiswa kubva kumapukanana ndevana vavo, kazhinji kunonzi semhuta kana maggot kana magot kana gape kana magog kana kushingaira kana kukanganisa-nekugadzira nekudaro.
Mune dzimwe nyika vana nhunzi dzinotengeswa kuti dzishandiswe nevanhu. Vanopa menyu chaiwo akadai sa pasta, soup uye pizza.
Munyika yemishonga, nhunzi dzemwana, dzinoti maggots kana maphuta kana maggot kana kuisa-iweget, zvinoshandiswa senzira yekurapa kune zvirwere zvekunze zvinowanzoti "maggot therapy".
Ikoko mavanga akaiswa pasi peganda kuti adye ganda nenyama yemaronda anoraira anotapukirwa, uuraye mabhakitiriya uye udye ganda rakafa. Kuita kuti zvive nyore kumishonga kuvhara maronda.
Magot inowanzoshandiswa nemapurisa kuti awane nguva yezvitunha mumatambudziko akasiyana-siyana ekuuraya.
Chimwe chikomborero ndechokuti zvinyorwa zve refilin gwesi zvinowanzoshandiswa nemakambani semakateti. Simba rayo rekunamatira uye elasticity zvakasimba zvakanyanya kupfuura zvemuti weRubber sap.
Iyo refilin jeni inogonawo kubata zvirwere zvakasiyana-siyana zvehutano hwemagetsi uye meina. Ikoko misungo miviri inowanzovhara kubuda kweropa uye oksijeni kuuropi.
Mukuwedzera kune zvipembenene uye mabhakitiriya, maggots anowedzerawo marashi eodragnik, zvinoshandiswa mumisha, tsvina yefekitari, tsvina yevanhu, mombe yemombe, zvitunha nezvimwe zvinhu zvakasikwa.
Imwe rubatsiro iyo vanhu vakawanda vanoitora muIndonesia iri kugadzirisa makwenzi aya mumasikirwo ezvisikwa uye mamwe mararamiro ehove uye huku.
Kazhinji maggot anogadzirwa kutanga mumaggot pasta, maggot pellets, upfu hwemaggot, maggot mutsva, maggot a Chrispy, tsvina yakaoma, tsvimbo yemagetsi, maggotti akaomeswa, ovuni yemagogetsi nezvimwe zvakadaro.
Izvi zvinogadzirwa zvakananga kune zvipfuwo kana kuchengetwa sezvigadzirwa zvehove, huku uye reptile zvokudya.
Kushandiswa kwemagetsi yemhuka yemhuka uye izvi zvinoshandiswa nokuti maggot ane ruzivo muzvakakwana, amino acids yakakwana uye yakakwirira mumapuroteni. Puroteni yaiva nezvikamu kubva ku40-56%.
Anatomy uye Biology
Zvisikwa zvakasiyana-siyana zvemhuka yenhunzi. dzimwe dzakawanda, mafuta, makuru uye maduku zvichienderana nemhando yavo.
Kazhinji ivo vane unyanzvi hwakanaka hwekugadzirisa mafambiro emhepo.
Musoro webhururuka unenge maziso makuru emakona ari pamativi uye nechepamusoro we musoro, antennae, ocelli, muromo. Ziso rinogona kufamba pamwechete nemusoro.
Nhunzi dzine neuroni dzinofambisa kufamba uye zvakare sechigadziro chekutonga kutungamirirwa kwemaonero pamusoro pekufamba kwakapoteredza.
Nokudaro iyo inofanirwa kutevera kufamba kwechibhururuka, kutendeuka nekugumburudza kamwechete kuti uone kugadzirwa kwechinhu chacho.Hapana yemhuka inobhururuka ine meno.
Zvinopedzerwa nezizizi mapepa mashoma (mapureni) uye zvokudya zvinodhaka. Kana iri zvokudya zvakasimba havangagoni kuzvidya.
Asi dzimwe mhando dzesabanidae nhunzi dzinopinza mumuromo mavo kuti dzigadziriswe uye dzinoyamwa ropa.
Basa racho nderokubata mapapiro uye kuva nemisimba yevhiri muchikamu chechipiri. Zvikamu chimwe chete uye zvitatu zviduku. Pane chikamu chechitatu mhinzwa ine dumbbell sewe counterweight kana ichibhururuka.
Pavanenge vachikwirirana kana kubatanidza nzvimbo yavo mushure mechikamu chimwe chete, uye chinzvimbo chechirume chinenge chiri pamusoro pomuvirikadzi.
Pasina nguva mushure mekunge nzvimbo yekusangana yakadzoka shure. Mukadzi wechikadzi anenge ane pamuviri achabvunza nzvimbo pedyo kana pamusoro pekudya kuti aise mazai.
Kunze kwekuti rudzi rwe BSF runobhururuka (Hermetia illucien) runoisa mazai eaii kwete pamusoro pezvokudya asi zvakapoteredza zvokudya.
Nzvimbo inowanzotsvakwa ndeyekuti ine zvakawanda zvekudya zvekudya se semala zvokudya mumaruva.
Fly mazai achawanzoputika munyaya yeawa asi zvisiyane zvakasiyana nezvipukanana zve BSF zvinoda 2-4 mazuva kusvikira mazai atsemuka.
Zvibereko Flies (drosophila marudzi)
Nyama Flies (sarcophagidae)
Horse Flies (mhuri tabanidae)
Dutu Dzizi (psychodidae)
Sandzi Flies (spiriverpa lunulata)
Mhuri-based fly (musca domestica)
Mbeu dzinobhururuka ndeyechirwere kuvarimi nekuti vanobhururuka michero. Iyo jobvu iri nyore zvikuru kubereka nokuti zvokudya zvinowanikwa zvakanyanya mumunda uye zvinotsigirwa nemamiriro ekunze eIndonesia nokuda kwavo.
Mumazuva emvura idzi nhunzi dzinowedzera zvikuru.
Mifananidzo yezvibereko Flies
3 mm kutora urefu
Ruvara rwemuviri rutsvuku-ruvara kana dappled
Ane maziso matsvuku akajeka
Iva nechirwere chembambo paunenge uchibhururuka zvishoma
Ivha inoumbwa seyakora mwedzi
Mazai akaiswa mumapoka pasi peganda kana maremare asina kukwana kana michero
Nhamba ye mazai ndeye 15 muzviyo
Mazai anovhunga pashure pemazuva maviri
5 mm pupa urefu
Mimba ine mutsara we 3
Hondo inobhururuka inonyanya kutaurwa
Dumbu remuviri rakanyanyisa
Upenyu huripo hunotora mazuva 16.
Rarama maruva mumichero pakati pe6-9 mazuva
7-30 mazuva masikati
Nhunzi huru dzinogara mavhiki e2-9
Iyo imwe fukasi yakasiyana uye yakasiyana nekuenzaniswa nevamwe. Nyama nhunzi dziri ovoviviparous, izvo ndizvo zvavanoisa pamavanga, tsvina, zvitunha, kuora kwezvinhu zvakasikwa, nezvimwe. Majeko haasi mazai.
Zviratidzo zveMhuka Mhuka
Nzizi dzenyama yevakadzi ndezirvivara
Iyo yakareba ye 6-14 mm motokari inobhururuka
Ane gorofu ganda chifuva
Iine 3 mitsara yerima inowedzera kune dorsal thorax
Iva nechiedza chakachena gumbo
Nyama Fly Life Upenyu
14-30 mazuva nemafungu ane makore
Nguva imwe neimwe yekutanga iyo inotanga kusvika pakati pe40-80 mabu
Kune marudzi akawanda ehove dzinobhururuka, kazhinji midzi uye huru. Iko kune girazi-ruvara rwemuviri, sirivha yakajeka, gorosi uye grey.
Bereka muzvitunha zvakasiyana-siyana zvehove kana nyama yakaora kana mhuka yemhuka kana kuora zvokudya zvekudya.
Nhunzi dzegorosi dzine unyanzvi hunoshamisa, dzinongoda imwechete yechipiri kuti iise mabhakitiriya nemishonga muzvokudya zvavari kutora.
Zviratidzo zveGreen Flies
Kureba kwevanhu vakuru vakura vhururu 1 / 4 "-1 / 12" inch
Chimbudzi chine girazi, sirivha yakajeka, gorosi uye grey
3 / 4 makuru makuru emakumbo makuru
7-12 mazuva masikati
Green mazai mazai achaputika 8-18 maawa
Urarame mune nyama yakaora kana hove zvitunha, kana mufudze wemombe, kana kuti tsvina yezvokudya. Kwete-kurega kurova shiri dzinobhururuka dzinova chikonzero chekuwedzera kwemahomwe ekurasikirwa. Kuruma kunorwadza zvikuru.
Zviratidzo zveHondo Dzvuku
Kureba kwebhiza yebhiza huru ndeye 25mm
Maziso ake ari matema kana madema
Meso emhashu dzemhomvu dziri pedyo nemumwe
Meso emakumbo echikadzi ari kure kwazvo
Hondo Fly Life Upenyu
Rimwechete raisa maza zvakadai se100-1.000 zvinhu
Hondo dzinobhururuka mazai dzichaputika pakati pe5-7 mazuva
Hupenyu hwehupenyu hwemabhiza makuru anokwira pakati peZ30-60 mazuva
Nhunzi dzinosvibisa kana kurasa mapute nhunzi. Makuvhu anofarira mashizha akadai sematope.
Zviratidzo zveMarara Matsi
Mapanga azere nevhudzi
Mazai achapwanya 1-6 pazuva
10-50 mazuva masikati
1-3 pupa chikamu chezuva
Iko Kune Zvimwe Zviviri zveSand Flies:
Iyi nhunzi ine ngozi nokuti inoruma mhuka nevanhu zvinogona kukonzera kuora uye zvirwere zvakasiyana-siyana. Kufanana nefivha huru.
Nzvimbo yavo yakapoteredza gungwa, masango emangrove, masango nemapurazi emapurazi Iyi shiri dzinobhururuka dzinoshanda usiku pakati pe9-4 mangwanani emaawa.
Mamiriro eSvondo Nhunzi
Muviri wake wakanamatira
Yellowish uye yakachena grey
Iine peji yemavara yakaoma maziso
Iva nemakore mazhinji, makumbo akareruka
Apo runyararo kana kupumha mapapiro nguva dzose inogadziriswa
Muviri nemapapiro zvakaputirwa nehuni hwakanaka
Kukwidzika kwepamusoro-soro kwemamita mashanu
Kuti zvibereke mazai, mapfupa echikadzi anoda ropa kubva kumakuru nemaapes
Pane imwe yakarara pakati pe30-50 mazai madema
Nhunzi huru dziri 10-11mm murefu
Rima tsvuku tsvuku makumbo.
Sand Fly Life Life
Urarame kusvika kumakore e2
Pupa kana kocoon phase yevhiki dze 1-2
Imba inobhururuka yemhuka ndeyezizi dzinowanikwa zvakapoteredza uye dzine vector yezvirwere. Imba yechikadzi inobhururuka kazhinji inobata kamwe chete.
Vanoisa mazai mukati maA100 mazai paanoora zvinhu zvakadai sezvokudya zvezvokudya, zvitunha, kana nyota.
Mamiriro eimba Imbuzi
Kureba kweimba yevanhu vakuru kunobhururuka kune pakati pe5-8 mm
Une mutsara wakamanikana 4
Ane ganda chifuva chechifu
Ane dumbu rakachena
Chiso chake chakanga chakafukidzwa nevhudzi rakanaka rakashandira kuravira nhengo
Kuva nezvinhu zvakaoma zvinowedzera maziso
Meso ake ane zviuru zvemarori izvo zvinobvumira zviratidzo zvakawanda
Mavhiri mana emapapiro anowanzogadzirwa uye haasi akajeka (akadzikisa)
Iyo magot yakachena
Chimiro chemuviri chakaiswa pamucheto we musoro
Iva ne 2 rekupedzisira ventilator
Ikova haina kubatwa
Iyo yakareba magotti inosvika 12 mm semunhu mukuru
BSF inobhururuka kana musheti mutsvuku achibhururuka kana kuti mhepo yakasvibira inobhururuka ine muviri uri pakati pe15-16 mm uye yakasviba.
Murwi mutsvuku anobhururuka munzvimbo dzinotyisa uye munzvimbo dzakasvibirira dzinogona kubereka zvakanaka. Kuvepo kwaro mumhepo inokura miti yakawanda yemaruva, umo vanodya nekuyamwa chimiro chehuchi uchi kana meshva emangwanani.
Kazhinji inowanikwa muimba nokuti mapute aya haadyi. Zvimwe zvinowanikwa mune imwe nzvimbo ine marara akawanda, tsvina uye tsvina kuti iise mazai. Mune imwe nguva mudzimai mukuru anogona kuisa mazai 185 - 1.235 mazai.
Mwana wemhuri: Hermetiinae
Binomial Zita: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
Hermetia inonyadzisa Copello, 1926
Dhigirii BSF nhunzi dzinenge 16 mm (5 / 8 inches). Iyo ndege inobhururuka yakakura ine muviri unonyanya kuchena.
Iine mavara akasiyana kubva mumatema, mabhuruu kusvika kune zvigadzirwa zvemucheka mubhokisi uye dzimwe nguva nemucheto wemuviri mutsvuku. Chipiri chemuviri chemuviri (mimba) ine nzvimbo yakajeka.
Iine maitiro akareba musoro uye maziso makuru kwazvo. Ane antenna inowedzera kaviri urefu hwemusoro. Ita 6 makumbo madema ane tarsi yakachena.
Iphipi reBSF rakaumbwa sechando. Uye pakuzorora, mapapiro acho akabatanidzwa nechepamusoro mukati mudumbu rinoputika. Black Black soldier inobhururuka inobhururuka.
Saizvozvowo BSF Wasps
Kana ichionekwa maererano nehukuru, ruvara, uye maitiro akafanana nemaspiti nezvimwe. Kunyanya nokuti furo antenna inotaridzika sewaivap.
Tarsi kumashure kwebhururuka rakachenesa uye ane zviduku zviviri zvakajeka "mahwindo" mumutambo wepamuviri.
Chii chinokonzera kuti hove yacho ive nechepakati "chiuno chechiuno". Huru dzembudzi dzinomhanya hazvifanani neimba inobhururuka uye nhunzi dzinomera.
Batsiro reBlack Soldier Fly
Vose vanobatsirwa zvikuru kubva kumashure mushure vanobhururuka vana vavo kana mapuropa kana maggot kana kuti iwe unobata uchitora kana maggots.
Iyo yakazotevera nemishonga, mapurisa, resitorendi, reptile nemabhizimisi ehove yehove varimi vemirimi vakawanikwa maererano neminda yavo.
22 Zvinokonzera BSF Human Friends
1. Yakachengeteka kuvanhu
Black Sombera Fly haisi ngozi uye yakachengeteka kuvanhu. Harmless BSF inofamba seimba inobhururuka uye nhunzi dzinomera.
Mukuru BSF ane muromo asi anogona kungoshandiswa kunwa saka haisi vector yezvirwere kuvanhu. BSF inobhururuka haigoni kuruma kana kutema iyo inoita kuti ive yakachengeteka kuvanhu.
Muhupenyu hwake BSF haina kudya, kuchengetedza hupenyu hwavo vaidha juice yemaruva uye dova ramangwanani.
Izvi ndizvo zvinoita kuti BSF ichengetedze vanhu. Uye ndicho chikonzero nei tisingawanzoonana BSF mumba.
BSF Haisi Kubudisa Dambudziko
Nhunzi dzinopinda uye dzichiuya kumba dzinobhururuka mapefu uye nhunzi dzinotyisa nokuti dzinouya kuzotsvaka zvokudya uye kuparadzira zvirwere zvinoputika.
Zvipembenene zvevanhu vakuru uye BSF hazvibatanidzi muboka rezvipembenene kana vecheta. Kusiyana neizvi, hondo yakasviba inobhururuka maphuta inotora basa rakafanana sehonye dzvuku.
Izvo zvinoreva sevaparadzi vemarara, dongo uye manyowa zvinogona kuparadza zvigadzirwa zvegasi uye kudzorera mishonga kune ivhu.
BSF Larvae isProteinine Renewable Sources
Murwi mutsvuku anobhururuka maperembudzi (BSF) inobva kune yakasimba (yakadzorerwa) mapuroteni ayo akanaka kwazvo mumugariro we aqua, kudya kwemhuka, mhuka uye kudya kwevanhu.
Larvae ine chido chakakura zvikuru chinogona kupedza kaviri kuyerwa kwe substrate mune rimwe zuva.
Larvae inogonawo kushandiswa kugadzira manyowa emasasa, marara emarara, motokari inoshandiswa kugadzirisa doro.
Kusanganisira miriwo nemichero, zvekurimisa zvinhu zvekurima uye zvipfuwo zvinosanganisira kushandiswa kwemombe uye kudyiwa kwevanhu.
2. Muromo weB BSF "Hauna Kukwana"
Kusiyana nemafungu emba, BSF ine "isina kukwana" chikamu chemuromo isingadyi uye inogona kungopedza mvura yakadai semaruva emusi kana mvura yemvura.
Nemhaka yokuti haidyi BSF haiparadzi zvokudya pamwe nemakemikari ekudya sezvimwe dzimwe nzizi, saka hazviparadzi zvirwere.
Masoja akadzima haasi kufarira kuuya mumisha kana zvokudya zvevanhu. Sezvo zvinoparadza uye coprovores, nhunzi dzomukadzi dzinotakura mazai dzinowedzera kufarira kuora kwekudya kana huwandu.
Mhomho yakashama inobhururuka haina kubhururuka zvakangofanana nedzimwe nhunzi. Murwi mutsvuku anobhururuka ane simba shoma nekuda kwekukwanisa kwavo kusagona kudya zvokudya sevakuru.
Murwi mutsvuku anobhururuka anonyanya kutorwa uye anotama paanopinda mumba, nokuti haazvidzi kana akabatwa.
Murwi mutsvuku anobhururuka kunatswa kwetsvina (yakachena) uye kwete kuruma kana kumhanya. Chengetedzo chete yezvidziviriro zvinopesana nezvikara zvinokambaira nekubhururuka uye kuvanza.
Kuti kuderedze varwi vemauto kubhururuka kwevanhu kunogona kuitwa nekugadzirisa pupa vasati vasvetuka kupinda nhunzi.
Imwe nzira ndeyekuzadza, kuoma, kuisa mapfupa emhuka manheru, kuisa nzvimbo yekuunganidza midziyo mukuku coops yekudyisa kamwe-kamwe, kana kudyisa shiri dzesango.
4. Sakti BSF fuka
Izwi rinoumbwa neBFF rinogonawo kudzosera mamwe mhando dzemhubu. Uye kana pane dzakawanda zvenhunzi uye bsf maggot mune imwe nzvimbo ipapo hapachazove nedzizi uye dzimwe mhiri dzinotya kufamba.
5. Organic Waste Kukonzera Agent
Mune rimwe zuva maggot yeBFF anogona kudya kaviri zvakasvibiswa zvinokonzerwa nehupenyu, tsvina kana mhuka.
Izvi zvinoreva kuti kana tine 100 kg ye bsf magot, ipapo 200 Kg yemarara ichabuda zuva nezuva. Tsvina inogona kuparara ndeyezvose zvinokonzerwa nemarara, tsvina, mombe yemhuka, uye tsvina yevanhu.
Mienzaniso yeMaggot Feed Organic Waste
Misika yemashamba (miriwo nemichero)
Mienzaniso yeMaggot Zvokudya Zvokudya
Mafuta echipiriso chemafuta
Mienzaniso yeMaggot Feed Animal Litter
Hondo yemombe yemombe
6. Geza usina kunhuwa
Kungofanana nemombe yakawanda inowanzokonzera kunhuhwirira. Kusiyana netsvina yakabudiswa ne bsf maggot haisi kukonzera kunhuhwirira.
Kumonyorera kweMaggot zviduku zvakanyanya sejecha kana kukura kwemaggot rectum.
7. Unogona Kurarama paF Extrem
BSf mapuranga anozivikanwa kuti akaoma musoro uye ane kodzero yekurarama mumagetsi ep. Kufanana nemaawa maviri-maawa mana ewaini yakachena, munyu, acids uye ammonia.
Mumamiriro ekutonhora anotonhora kana kana pasina chikafu cheSFF chichatsika, chingave chakasara uye chikarara uye chichatanga zvakare apo kutaridzika kwemhepo kunodzokera kune yakajairika.
8. Akapfuma Mukudya Uye High Protein
Magical BSF ine 40-56% yakawandisa protein, 30-36% ether yakadzika, 15-16% madota, 4.9-5.2% calcium, uye 0.61-0.64% phosphorus muome yakaoma.
BSf chironga chinowedzera muzvakakwana, chakakwana mumamino acid uye yakakwirira mumapurotini saka zvakanaka kwazvo kupa semhuka yekudya.
Mienzaniso Yezvipfuwo Kudya Maggots
Mhando dzose dzehuku
Mhando dzose dze shiri
Mhando dzose dzemata
9. Natural Controled BSF Population
Avhareji yezera re BSF rinongodaro 5-8 pazuva uye anogona kusvika 14 pazuva. Munguva yehupenyu hwehupukanana dzemvura dzinobereka kuburikidza nekukamura kana kubata.
Mushure mekusangana kana kuroora murume wevarume mutsvuku ari kubhururuka munyaya yeawa ichafa. Apo varwi vemauto vanobhururuka vakadzi vachafa mushure mokuisa mazai avo.
Nokupa kupa zvokudya nenzira yemarara, shisi kana marara, mabukira maduku achangobva kutemwa kusvika kune chikwata chevanhu vakuru akaenzaniswa neC18 pazuva.
Pakati penguva iyo muvhiki yechipiri mutumbi mukuru weiyo inokura uye unokura 15.000 muhukuru.
Izvi zvakakura kukura kwemapupu zvinounza zvakanakira varimi vemagetsi, izvo zvinogona kukohwa uye kunopiwa kuzvipfuwo mumavhiki maviri chete.
Vafudzi vakawanda vanopa mazamu avo pamazera maviri evhiki nokuti mavara emaruva aya haasi akaoma uye anofarirwa nehove, huku nekukara.
11. Vakawanda veMhizha Vanokurudzira
Chikadzi BSF inogona kuisa mazai pakati pe 185 - 1.230 mazai. Mazai aya anoiswa zvisina kufanira pamusoro pezvokudya kana doro asi pamusoro pezvokudya.
Nhamba ye mazai yakaenzana nekukura kwemuti mukuru weBFF. Mukadzi wechikadzi BSF ane chimiro chikuru chemuviri uye mapapiro akawandisa ane tsika yakakwirira ye mazai okuenzaniswa nezizizi dzine zviduku zviduku nemapapiro.
Mushure memazuva maviri kusvika mumazuva mana aya mazai achaputika muC1 kamwe magot uye achakura kusvika kune 6 pakati pevhiki mbiri kusvika kutatu.
Mamiriro ezvinhu apo kune zvokudya zvakakwana uye kutonhorera kwemhepo pakati pe 25-35 ° C. Uhu hwemazamu hutsva hwakagadzirwa hunenge huri 2 mm, zvino hukura ku 5 mm. uye mushure mekuchinja ganda rinokura ku 1,5-2 cm.
Maggot BSF inogona kudya chero chinhu chinodyiwa nevanhu uye chinogona kuputsa tsvina, tsvina uye zvokudya nokukurumidza.
Izvi zvinoita kuti Maggot BSF ibudiswe nevanhu vakawanda munyika. Chimwe chinhu chakanaka ndicho chikafu chekudya uye mharidzo inowanikwa mune zvakawanda zvakatipoteredza uye inogona kuwanikwa inenge isina rusununguko.
Kunaka kwekuwana maggot ekudya kunowanikwa ndeyekuti varimi vanoikuridza inogona kubudiswa pamutengo wakaderera.
13. Hapana Chinodiwa Nyika Yese.
Kubudisa maggot kunyanya maggot sehove uye huku wekukudya hazvirevi nyika yakakura. Isu tinogona kushandisa kuraira, kurutivi uye kumashure kweimba neyokutanga kwema 3x4 mamita.
Kunyangwe iwe wakatove wakagadzikana mumunda wemazuva ano weBFF wekugadzira, iwe unogona kuzvikurira pamba seweYurie BSF shamwari muguta reKebumen.
Kune varairi vehove, huku uye bff maggot zvinoshandiswa zvinoshandiswa sekudya kwemhuka, uye zvinowanzogadzirwa kuva zvipfeko zvekudya.
Muenzaniso weMaggot Akaitwa
14. Yakanaka uye inoshanda
Kuti kuve neBFF maggot iri nyore kwazvo, yakakwana kuti ipe dongo kana tsvina inogadzika mumudziyo uye inoiisa munzvimbo isina kunyatsoona mvura.
Mazuva mashoma BSF maruva anogona kukohwa uye anopiwa zvipfuwo. Nzira yepamusika inoshanda chaizvo.
Nemhaka yekuti magetsi eBSF semunhu mukuru achabva achisiya midziyo yekusvibisa kuenda kune imwe nzvimbo ine rima uye yakaoma (kuzvikohwa) kufungisisa nekushandura kuchikamu chinonzi pupa mushure mekupedzisira kuputira kune munhu mukuru BSF inofamba.
Kunzwisiswa kwemajeri kunobva mupuroteni inogona kukurumidza kudzorerwa zvakasununguka.
Kugadzirwa kwemagetsi kana kukura maggot ndiyo nzira yekugadzira mapuroteni anowedzera ayo ari mugumisiro wekuenderera mberi kwekugadzirwa kwemagetsi.
Izvi zvinoreva kuti furo BSF neMaggot nzizi dzinowanikwa mune zvakasikwa kwenguva yakareba kwazvo saka hapana chikonzero chekuvhiringidzika uye kunetseka nezvekubuda kunze kwezvinhu.
Ndokusaka varimi vanofarira maggotti vanoita magotti seprotini inobatsira hove dzavo uye huku.
Maggot ane yakakura makoriki kana simba rinopa kuti kana rinodyiwa nezvipfuwo kunoita kuti hove kana huku dzikure nokukurumidza.
Nemhaka yekuti zvipfuwo zvinotsigirwa nezvikori zvakadyiwa kubva kuBSF maggot. Zvichitaura zvishoma, makoriyori masimba anodiwa nemuviri wehove, huku nemhuka zvinokambaira uye nevanhu.
Kukwanisa kufamba uye kuita mabasa emuviri zvakakodzera kuitira kuti muviri uve nekudzivirira kwakanaka kune zvirwere zvinorwadza.
Semuenzaniso, iyo calori inoda catfish inowirirana yakakura seyo 9,2 - 10,1% mafuta kuti awane zvido izvi inogona kuwanikwa kubva kune BSF maggot.
Maggot ane mafuta anogadzirwa 29,65 (Fahmi et el, 2007). Asi kana ichionekwa kubva kune rumwe rutivi, maggot ane% akasiyana-siyana.
Kuona mafuta anobva mumagetsi ari akakwirira kudarika zvido zvehove (kune mamwe mhuka funga chengetedza kuitira kuti isanyanya kudyisa).
Zvadaro zviri nani kana maggot BSF inoshandiswa se pasta, fura, maggot pellets nezvimwe zvakadaro.
Kuchengetedza majeko aya muzvigadzirwa zvakasiyana-siyana kunze kwekudzivirira zvinodhaka zvakanyanya izvo zvisina maturo uye zvinogona kuva nemigumisiro yakaipa pamhuka. Icho chinhu chinoparadza.
17. Anopikira Bhizimisi Mikana
Zvokudya zvezvipfuwo zvegore negore zvakakura 6,2% -8,1% mu 2018 yekudyisa zvipfuwo zvekufambisa zvakavharwa pamamiriyoni zana emadhora ekudya.
Iyo yakawanda yemhuka yekudya inofanirwa inodiwa inoita kuti magog production ave mukana mukuru.
Kubudirira kwevarimi vemagetsi ndeyekuti ivo vanodhura zvikuru uye vanenge vasingasunungurwi, kunyange mune zvekufambisa, ivo variwo vashoma.
Kuenzaniswa nemhuka yekudya, zvigadzirwa zvekutanga zvinotengeswa nehove yehove uye yepamusoro mari mukutakura kwezvinhu izvi zvakagadzirwa.
Kudzidza Pasina Kunzwa
Kubva kumativi akasiyana-siyana, varimi vanogadzira vanogona kukunda, asi chokwadi kuti vape zvekudya zvisingabatsiri uye zvakanakisisa, vanoda kudzidza kuti vangaita sei maggotti akanaka kuitira kuti iite magotti akawanda achienderera mberi.
Uye inofanira kunzwisiswa kubva pakutanga, kutanga nekurima maggot pasina kunhuwa. Kuti Maggot ako mabhizimusi aite bhizinesi kuti ave akachengetedzeka uye akasununguka kuti asakanganiswa nemunharaunda.
Nekutanga tinogona kuisa mikana iyi pamusana muduku kana wemusha kutanga.
Kuwedzera ruzivo uye ruzivo runoita kuti tive nechivimbo chekusimudzira bhizimisi kune chikuru.
18. Yakakodzera Indonesian Chimiro
Mamiriro okunze anotonhora uye
Mamiriro okunze eGungwa
Nenguva yekutonhorera muIndonesia, BSF (mutsvuku weshiri inobhururuka) inobhururuka inogona kurarama nekubereka zvakanaka.
Kubudirira kwechiitiko ichi chiri kutonhora ndechokuti inogadzira zvose zvese zveMagfot BSF dzemazuva ano pasina kunhuwa kuva:
Kukurudzira mazuva ano BSF Maggot asina kunhuhwira kwekutengesa
Mazuva ano BSF minda yemarota isina nyore kunhuhwirira
Kukura kwemazuva ano kweBSF Maggot pasina kunhuwa kunobatsira zvikuru
Mazuva ano bsf maggot kukura kunze kwekunhuhwirira kwekukurumidza
Kukudziridza Maggots kunze kweShoma Kubva Kuchena
Inzvimbo inotonhorera muIndonesia inobatsira varimi kuti vasunungure mitoro yekugadzira mitoro.
Kana ichienzaniswa nedzimwe nyika dzine nguva mbiri chete. Kugadzira bhasi yeFBF inotora mazana emamiriyoni emari nezvose zvinyorwa uye magetsi kuitira kuti kutonhora mumutambo kugadzikane.
Kunyange zvazvo muIndonesia hazvidikanwi nokuti mamiriro ekunze muIndonesia anoramba akasimba. Saka kuti uite dhiramu nekuenzanisa kwe11-2, haufaniri kushandisa mazana emamiriyoni emari.
MuIndonesia kugadzira BSF madhiramu zvakakwana neRp500.000-Rp600.000 mari.
Zvichida Zvisingabatsiri Zvokudya Maggot
Kuti ibudise maggot, chimwe chezvinhu zvinofanirwa kugadzirirwa ndezvimwe zvinhu zvakasikwa semashoko ekutanga ekugadzira maggot.
Kufanana nemarara yakasikwa, matongo, mhodzi yezvipfuwo nezvimwe. Zvose zvinokonzerwa nemishonga zviri nyore kuwana. Zviri nyore kuwana zvigadzirwa zvekuita kuti Maggot awedzere kubatsirwa pakutanga bhizinesi remagog nyore.
Uye izvi zvinoshandiswa zviripo zvino zviripo zvakapoteredza zvakapoteredza isu. Ingotarisa danda rine tsvina pamusika, mumigwagwa uye mune zvinyorwa.
Usingarevi kutakura kwepasipi, mafuta emichindwe anokandwa kunze nemuridzi. Kusanganisira mhuka yemarara inopararira uye inokanganisa zvakatipoteredza.
Nekuwanika kwemagetsi, zvichiita kuti bhizinesi remaggot rive nyore kuita.
Zvimwe Zvisingakoshi Zvokurima Zvokudya zveOorless Maggots
Iko mari yakaderera yekutsvaga kwekutanga uye kusununguka kwekuwana maggotti ekugadzira zvinhu zvinoita kuti bhizinesi re maggot ribatsire.
Nemhaka yokuti imwe chete shoma shoma inogona kutanga uye kuwanikwa kwezvinhu zvipfeko zviri nyore kuita zvinogona kuita mari yekugadzira uye kushambadzira kwebhizimisi kunobatsira zvikuru.
Nokukurumidza Odorless Maggot Kuraira Zvazvakagadziriswa
Kukura kwemagetsi BSF mumamiriro ekunze kunotonhora zvakanyanya kufanana nekuenzanisa nenyika dzisingasviki.
Maggot BSf munzvimbo dzinotonhora zvinogona kukohwa mu 18 chete pazuva. Uye BSF maruva anogonawo kukohwa kana vhiki imwe chete yekare.
Nguva shomanana mukugadzira maggot mumamiriro ekunze kunopisa kunobatsira zvikuru varimi pakupa zvokudya nokukurumidza uye zvisingabatsiri.
Saka iyo mhuka inopa zvokudya inoda kuwanika.
19. Kutakura Nzvimbo Iko Kwese
Kuti ibudise maggot, pane zvigadzirwa zvakawanda uye zvigadzirwa zvinofanirwa kupiwa zvakadai sa BSF drum, BSF yevha yeji, evha rack, kuwedzera kwekugadzirwa kwebiotong, nezvimwewo.
Kuita BSF madhiramu haafaniri kushandisa zvishandiso zvitsva, Iwe unogona kuita BSF drum kubva kumarara kana zvinhu zvisina kushandiswa zvakadai semiti yakashandiswa, zvigadzirwa zvesimbi uye mbatya pamba.
BSF mabheji anoitwa senzvimbo yekuberekera nhunzi kuitira kuti irege kubhururuka kwose kwose. Nokupa BSF drum, zvirokwazvo mbeu inogona kuchinjwa sezvinodiwa.
Zvine mazai eFBF zvinogona kuva nemabhasi, zvigaro, zvishandisi zvishongo, panic nezvimwewo. Amai mazai anotorwa kana kukohwa kubva kuBurf drums anobva apwanyika mumidziyo iyi.
Iko zvino inogadziriswa muchigadzirwa kuti iite yakarongeka zvakanyanya sekutarisira zvikara.
BSF mazai evha anogona kuitwa sechinhu chakareruka sehuni, mbatya uye zvimwe zvinhu zvinosvibisa. Biotong semudziyo wekuwedzera kwemagetsi mukugadzirisa mushure mokunge mazai avhara uye ozoendeswa kuwedzerwa kwebiotong.
Biotong inogona kuitwa ne stacking rack systems sekuita pasiworm racks. Rongedza zvakanyanya se3 kune 4 kuvhara.
Nenzira iyi kusimwa kwemagetsi kunogona kuwedzera nyika yakamanikidzwa mugaraji kana mudivi reimba inopisa.
Biotong inogonawo kugadzirwa nemiti yakamende yakasungirirwa seyakagadzira mabhanga ehove asi anenge 30 cm murefu.
20. Bhizinesi BSF dzakasununguka uye mazai ezvisikwa
BSF nzizi dziri kwose kwose muIndonesia. Nzira yekupa zvinoshandiswa zvekicheni mumudziyo, varimi ve BSF vachauya vagoisa mazai mumidziyo yakapiwa.
Kunze kwezvimwe zvose zvekicheni kune zvakawanda zvakawanda zvinogona kushandiswa chero bedzi izvo zvinoshandiswa zvinosanganiswa mune zvakasikwa uye hazvisi chepfu kana zvine pesticidhe.
BSF ine izwi rine simba rinodzokorora imba inobhururuka uye nhunzi dzinomera. Saka kuti pa substrate nhau yatakagadzirira ipapo hakuzovi nekusanganiswa uye kusanganiswa neimba nhunzi uye mapukwe.
Izvi zvakakosha zvikuru kuitira kuti magogti edu mapurazi asakanganise kubva kumapukanana anotakura zvirwere. Kwete kunhuhwirira, kuchengeteka uye kugadzikana kune avo vanokudziridza kana kunzvimbo dzakapoteredza.
22. Maggot BSF ishamwari yeChicken Farmers
Maggot mashizha anobhururuka anokwanisa kuderedza zvakanyanya E. coli 0157: H7 uye Salmonella enterica inowanikwa muhuku yehuku.
Maggot mashizha anomhanya nokukurumidza anouraya zvinosvibisa, mapfumbamwe emakemikari aripo kubva pakusachena mumaawa e24.
Black Black soldier inobhururuka nokukurumidza inoderedza huwandu uye uremu hwezvinhu zvinoshandiswa kuparadza. Nenzira yemakoroni emakoloni vanoputsa zvokudya uye vanoita kuti kupisa, kuwedzere kubuda kwemvura.
Nhamba inokosha inoshandurwa zvakare ku carbon dioxide iyo inopedzwa nemaggots uye symbiotic / mutualistic microorganisms.
Larvae mu compost system inowanzoderedza huwandu hwemumutsetse maererano ne50%. Uye inogona kusvika ku90% ne BSF Modern Pasina Bau nzira yekurima ne Yurie BSF.
Kuparadzirwa kweFFF Flies
Iyi mhuka yakatanga kuibva kuototoriki ecotone, asi mumakumi emakore achangopfuura yakapararira munyika dzose dzenyika, dzichida kuva dzese.
BSF inowanikwa munzvimbo zhinji dzeEurope, kusanganisira Iberian Peninsula, kumaodzanyemba kweFrance, Italy, Croatia, Malta, Canary Islands neSwitzerland.
BSF inogonawo kuwanikwa muAfrotropic ekozon, ekozon Australasia, kumabvazuva kwePalaarctic ecozon, Nearctic ecozon, North Africa, uye Ekozon Indomalayan sphere.
BSF Upenyu Hwese
Nhunzi huru dzechikadzi dzinoisa mazai pakati pe 185-1.235 mazai panguva imwe chete. Mazai aya anowanzochengetwa mukuputika kana pamusoro pepamusoro kana kuti pedo nezvinhu zvakasikwa zvakadai semuriwo kana manyowa uye kuputika mumazuva gumi nemana 2-4.
Mavanga aya achangobva kuputika ane 0,04 masentimita (1 mm) yakareba, anogona kusvika ku 1 masentimita (27 mm) kwenguva refu uye 0,10 kusvika ku 0,22 g pakuguma kwechirwere chechirwere.
Nharaunda yacho inoputika inotenderera zuva re18-22, apo danho rekutanga rinotanga nezvemazuva 7. Kureba kwechigadziro chinokonzera kunogona kunonoka nekuwedzerwa mukati pemwedzi mishomanana pakadzika kana kutadza kwekudya.
Chikamu checocoon chinobva ku1 kusvika kumavhiki e2. Nhunzi huru dzinogona kurarama pakati pe5 - 8 mazuva apo yakapiwa uchi kana shuga yejashu kana iri muutapwa kana inonakidza inwiwa isati iri musango.
Nhunzi huru dzinogara nemafuta anounganidza panguva yechando.
IBFF inobhururuka ine chimiro chakakwana pakuvandudza huripo. Chimiro chakakwana chemasamorphosis ihupenyu hwehupenyu kana hupenyu hwemhuka dzinosangana nezvikamu zve4 muupenyu hwavo.
Muhupenyu humwe hupenyu BSF inotora pakati pe40-44 mazuva. Nguva yacho inobva pane zvinhu zvakadai sekushisa kwekutarisira uye zvokudya.
I BSF inofamba inosiyana nokuti mumararamiro ayo kune zvikamu zvakawanda, zvinonzi 5 sendima sezvinotevera:
Mukuru / Imago Fly Phase
Chikamu chevakuru vakuru kana imago ndiyo nhanho mushure mokunge chironga cheputi chinoputika kubva muhomwe yayo. Muchikamu chechigaba BSF inofamba haiti kudya uye kunwa chete munguva yeupenyu hwavo.
Vechidiki BSF inofamba iyo ichangobva kuputika uye ichibuda mumabhomba awo uye mukati meawa 12 chete inokura zvishoma nezvishoma kuva nhunzi huru.
Nhunzi dzinenge dzichangobva kucheneswa dzichabuda mumucheka wemvura uye dzichibhururuka kusvika kune imwe kuti dziwane zvitubu zvezuva uye kunwa.
Nguva yebsf kuruka huru yakanyanya kwazvo, iyo iri pakati pe5-8 mazuva, izvi zvinokonzerwa nezviitiko zvemugumo, humisi uye inopa doro.
Mushure mekunge munhu mukuru akakurira BSF famba ichakwirirana kana kubata. BSF nzizi dzinokwanisa kukwanisa kubudirira uye munguva pfupi.
BSF inofarira kunwa
BSF inonakidzwa kunwa doro remvura yemangwanani uye kutarisa michero yakasanganiswa uchi uchi. Mujeri rekutapwa tinogona kupa Java shuga sechinotsiva uchi.
Iwe unoita izvi nekusvibisa mvura iyo yose mumutambo.
Mukugadzirisa kubata kana kubata mubereki wechikomana kunoswedera kunekadzi. Mukugadzirisa kuswedera kumadzimai echikadzi BSF anoshandurirwa kune imwe nzvimbo uye ndeyechinguva.
Nzvimbo yemakumbo ehurume pakutanga ichibhururuka uye ichifamba pamusoro pomuviri wemukadzi, iyo inotarisana nenzira imwe chete, asi mumasekondi mashomanana ipapo ichidzoka uye ichipikisana.
Muchikamu chino chekudzivirira kwemhepo inova chinhu chinoita basa rinokosha inotonhora. Iyo yakakwana yekushisa kweFFF inobhururuka iri pakushambidzika kwe30 ° C.
Kunyange zvazvo BSF isingadyi zvokudya panguva yaro yeupenyu, inofanira kupiwa mvura. Kurapa nokupa kunwa muhupenyu hwehuchi mumakumbo kunowedzera mazai ega.
Kupa uchi kana mvura kana mvura yeJavanese shuga inobatsira kuwedzerwa makore enhunzi.
Uye inogona kuonekwa muhuwandu hwemazuva ekuwedzerwa kwehupenyu hwehupukanana uye nhamba yemazuva ekuisa mazai emhashu.
Nhamba Yemazuva Okuwedzerwa kweMafungu Ari
Zuva re10-11 ndiro zuva guru reBBCF rakapiwa uchi
Zuva re5-8 ndiro zuva guru reBBCF rakapiwa mvura yekunwa
Nhamba yemazuva ekuisa mazai anobhururuka
Zuva re5 ndiro zuva guru rekuisa mazai mumapukwe anopiwa uchi
Zuva re7 ndiro zuva guru rekuisa mazai mumapukanana anopiwa mvura yekunwa
Nguva iri pakati pe10-30 maminitsi ndeye BSF yevakadzi yekuisa mazai. Nevhareji nhamba pakati pe546-1.505 zvinhu.
Nhamba ye BSF mazai pakati pe 16,2-18,9 mg uye kuyerwa kweii pakati pe0,027-0,032 mg. Nguva yepamusoro inowanzoisa mazai pakati pe11.00-15.00.
Chikadzi BSF inobhururuka ikaisa mazai kamwe chete, uye inofa maawa akawanda gare gare.
Zvimwe BSF Mukadzikadzi
Dhigirii BSF Makumbo echikadzi anowanzobudisa mazai akawanda achienzaniswa nehadzi dzinove dziri duku muhukuru.
Simba rakakosha rakasara reFFF nhunzi dzinowanikwa mumvura pakati pe55-60%.
Nhunzi huru dzevanhu vakuru dzichabatana uye dzinosvibisa pa 24 ° C (75 ° F) kusvika ku 40 ° C (104 ° F) kana kupfuura. Panenge 99,6% oviposition mumunda inoitika pa 27,5-37,5 ° C (81,5-99,5 ° F).
Matawende e-quartz-iodine ave achishandiswa kubudirira kuti akurudzire kubatana kweezizi huru. Mumamiriro okunze anokonzera, zuva rakakwana rakananga mangwanani nemasikati richaita kuti BSF iite uye iise mazai.
Kunyange zvazvo zuva risina kujeka riri nani BSF mushure mokunge mushure mokunge musikana.
Kunyara pa70% kunofungidzirwa zvakakwana kune zvikamu zvose zvehupenyu hwayo. Iyo substrate haifaniri kudikanwa kuti ive nemakoko, asi substrate inonzi inofanirwa kuita segadziri weunyoro unodzivirira kuoma.
93% yepamusoro yekubhururuka kubhururuka apo unyoro hunochengetedzwa pa 70%.
Huru dzehondo dzinobhururuka maphupa zvinogona kudyiwa nevanhu. Larvae inonyatsoshanda mukuchinja mapuroteni, ane upi kune 56 protein, yakawanda mu calcium uye yakakwana amino acids.
Mumaawa e432, 1 yevanhu vemauto inomhanyisa mazai inoshanduka ku 2,4 kg yeproteine, zvinoreva zvinopfuura ma 45.000 mazai mu 1 g mazai. Nokudaro, inogona kuva chitubu chemapuroteni kuvanhu.
Hazvibereki mapuroteni, asi kuchinja mapuroteni asina kudyiwa nevanhu anova zvokudya zvekudya.
Chimiro chinonzi maggot chinonaka chinonzwa zvakafanana nematehwe akabikwa.
Chikamu chezai chinoitika mumazuva 2 - 4. Nguva yakasiyana iyo inowanikwa inokonzerwa nekupisa uye kunhuhwa kwakapoteredza nzvimbo yezai.
Kazhinji vakadzi vechidiki BSF vachaisa mazai munzvimbo isina mvura uye nehuwandu hwezvinhu zvakadai semhando yorudo kuvana vavo pavanenge vabvongodza gare gare vana vavo havasi "varombo" uye vane nzara.
Mienzaniso yenzvimbo iyo mazai eSFF akaiswa mubereki we BSF
Nzvimbo yekurasa nzvimbo
Muchikamu chezai, musikana wechikadzi BSF inobhururuka uchabereka mazai akawanda pakati peC185 - 1.235 mazai kana kazhinji anonzi cluster.
Chimiro cheSBF yai mazamu ane urefu hwema 0,7mm, apo inotanga kuiswa nemubereki wechikadzi, mazai aya akachena akachena.
Uye zvishoma nezvishoma ruvara runoita ndarama yellow. Kuti aparadzanise mazai akave akacheka kana kwete, iyo nzira ndeyokutarisa kana kuona mazai eBFF.
Kana ruvara ruchichinja kune zvishoma zvitsvuku (marangi) uye chimiro cheii mazai hachina chakanaka kana chisina kunaka.
Saka tinogona kuva nechokwadi kuti mazai akashandura uye akachinja kuva mhondi kana maggots kana magots kana kuregerera.
Mhizha yekubhabhatidza BSF mazai anogona kuva chero zvinhu zvakadai semarara, tsvina uye manyowa.
BSF mabuva inowanzoshandiswa pakuita manyowa kana kushandura tsvina mumhuka yekudya. Kukohwa kweputipa kunopiwa sekukudya, hove, nguruve, lizards, turtles, mazhenje ane ndebvu uye kunyange imbwa.
BSF mabuva ndeimwe yemhuka yakanakisisa mukushandura fudzi muzviomasi. Mukuwedzera kune mapurotheni ekugadzira, mapuropa ane mapuropa anogadzirawo zvimwe zvezvinhu zvinokosha zvinonzi frass (kasgot / zvakashandiswa magog).
Kasgot isiri yezviyo uye zvisingasviki zvinogona kushandiswa sehuniki yemuorivhi. BSF mapiritsi asati apinda muchikamu chevanhu vakuru (prepupa) kuburikidza nematanho matanhatu.
(Kukurukurirana mune ruzivo urwu kunoshandiswa muzvikamu zvitatu kuti ubatsire kunzwisisa uye kugadzirisa mune zvaunoita).
Ikoko kune imwe nzvimbo yepaspapa masvora haasadyi zvakare, uye anodurura midumbu yavo mukati, muromo wavo zvikaita zvikorekedzo zvinoshandiswa kukwira.
Kutanga kuisa chikamu
Chechipiri uye chiitiko chechikamu
Panokutanga purogiramu yemapuranga maduku achafamba achienda kunzvimbo yekudya. Ichi chikwata chekutanga cheP Instar chemakumbo chinonyanya kuda zvokudya zvakawanda zvakadai sechinhu chekuwedzera kwayo.
Mushure memazuva e1 - 2, chikwata chekutanga chekutanga chichabudiswa kubva paganda uye kupinda muchipiri chechikamu.
Muchipiri chechipiri, maruva ano ane hukuru hwakakura huri pakati pe 4-5mm, ane maitiro akafanana sechikamu chekutanga chekare asi ane muromo mukuru kudarika chekutanga.
Kuonekwa mune chikamu chemuviri wekare unenge uine bundu duku. Uye kuenda kunongedza zvakare unova wechitatu chechikamu ichocho chichava chichioneka.
Muchikamu chechitatu chechikamu, maruva aya ari pakati pe15mm kana kuti akawanda anobva pane zvakapiwa (zvinowanika).
Chechitatu chikamu chechirva chekare chakatova nekate uye chinoshingaira kuti chiwane nzvimbo ine mvura uye inodzivirirwa kubva kune mvura uye zuva rakananga kusvika panguva iyoyo rinokura kuva pupa kana kocoon.
Iko kunotungamira kusimuka kwemhuka iyo inoshandiswa nemurimi wemagetsi kuzvizvigadzirira-kutora preppa pachayo.
Nzira yekukohwa inogadziriswa nekupa biotong chigadziko chine nzira yekutenderera kana kuti inogonawo kupa nhanho iyo inobvumira kuti prepupa ibude kubva ku biotong uye inowira munzvimbo yekuunganidza.
Iyo yakakwana yekushisa yemaruva kukura nokukurumidza i30 ° C.
Maggot mashizha anobhururuka ane simba uye anogona kurwisa mamwe acidic uye yepamusoro yemamiriro ekushisa kupfuura zvihonye. Murwi mutsvuku anobhururuka mapapu anogona kurarama munguva yechando.
Uye murwi mutsvuku anobhururuka mapapu achabhururuka kana huwandu hwevanhu huri hutete, uye kupisa kwakanyanya kunoumbwa nema microorganisms mumarara emarara kana compost mapurisa.
Muchikamu chekutanga, mapurova ane zvipembenene zvakakwana zvinokura kuva mimwe miviri yakakura.
Panguva iyi inogara kwemazuva e7 asi inoshandiswawo nekushisa munzvimbo imwe neimwe. Ichando chiri pakati pe26-33 ° C.
Muchikamu chekutanga cheputipa maruva emuviri wemuviri wemaruva anotendeuka. Ruvara runoshanduka mumaruva sechiratidzo chemapuranga yakakura uye akagadzirira kuchinja kuva pupa kana kocoon.
Madzivha echikadzi BSF mukukura kwawo ari mu substrate kana mashizha akareba kupfuura mukomana wemaruva.
Kuwedzera Kuwedzera Kwemadzimai Larvae
Uye mapuranga echikadzi anorema zvikuru kana achienzaniswa nemakumbo ehurume. Muchikamu chepaspapa iyo preppa larva inongosiya mashizha.
Tsvaga nzvimbo apo mupata unodzivirirwa kubva kune zuva rakananga nemvura.
Iyo preppa dialam inogona kuwanika nyore mumisungo yemashizha, mapuranga akavharidzirwa, mapuranga emuriwo wemhuka, mafuta emichindwe sludge emirwi nezvimwe zvakadaro.
Izvi zvinoitwa kudzivisa zvikara zvakadai semakungu, hove, shiri, madariki, imbwa, mutsara nezvimwe zvakadaro.
Nokuti mhuka idzi (mhondi) prepupa yakafanana nenyuchi inonaka uye yakakwirira mumapuroteni. Iri kugadzirirwa muupenyu hwemazuva ese neruzhinji rinowanzotumidzwa sembeu kana vana.
Kana iwe uchinetseka kuwana prepupa kubva pane zvakasikwa. Imwe nzira ndeyekutenga kubva kune maggotti varimi.
Unhu hwePepapa hauna kufanana
Maggot imhuka ye omnivorous, zvinoreva kudya chinhu chero bedzi chiri muhupenyu.
Kupa chikafu kana kudya kumapuranga sezvo kubvumira kukura kuva mutezo unopikisa zvikuru hutano hweputipa.
Uyezve, izvozvi zvigadziriswa zvinoshandiswa kuitira chinangwa chokuva varimi kuti vadyarwa zvakare.
Kana zvokudya zvakapiwa zvinongova mumhando yemarara kana mhodzi yemombe kana bran, zvechokwadi rudzi urwu rwehuputipa huchava hwehutsika hwepamusoro sekudzivirira.
Mhando iyi ye preppa yakanaka chete kana inoshandiswa semagetsi zvakashandiswa. Kwete yezvipfeko zvichange zvichishandiswa zvekurima zvakare.
Kugadziriswa kwekudya kwakasvibiswa uye kusina kufanana kuchaita kuti preppa ihutambuke nekushaya kukwana kwezvinhu uye inogona kushandiswa sezvipfeko.
Varimi vemaggotti vasinganzwisisi uye vanopa nguva yekudya uye vachiitengesa sevanoshambadzira vachakuvadza.
Chaizvoizvo izvi ndezvekuti havanzwisisi. uye inongorongedza kuderedza mari yekuchengetedza kusvikira mutengesi inotengeswa.
Asi kune avo vese vanoda kukura nekudziridza BSF, hazvibvumirwi kutanga mushonga wemagetsi nekutenga mbeu isina hanya.
Nokuti mhuru yaunotenga inoshandiswa zvakare. Ikurima maggotti inotungamira kutengesa zvigadzirwa zveMaggot mombe dzinofanira kunzwisisa maitiro ekudzidzira unyanzvi.
Nemhaka yekuti Maggot ane unhu hwe "gutakura".
Chii chinonzi Gut Gutakura?
Kugadzirisa mutoro ndiyo nzira iyo mhuka inokurudzirwa uye inopa zvokudya zvinovaka muviri kuitira kuti ipe mishonga iyi kune mhuka dzinopambwa kwavari.
Iri izwi rinowanzoshandiswa mukubatanidzwa kwegadziriro yemagetsi iyo inoshandiswa sechitsva chekurima zvakare.
Maggots anotengeswa kwekutengeswa kwemhuka dzinofanirwa kutengesa anofanira kuva nehutano hwakakwana.
Nokupa zvipfeko zvekudya zvepamusoro zvisati zvaitwa mu-broodstock, preppa ichava nehutano hwakanaka sechirudstock. Vice versa.
Gorogi rinowanzoitwa nekupa michero, miriwo, uye zviyo kana zvikafu zvekugadzira izvo zvakakwana zvakakwana.
Zvimwe zvekutengeserana zvinowanikwa uye zvinotsigirwa zvakananga nezvekutakura mitoro yakadai seM M katatu kana Magic Media Maggot.
Triple M kana 3 M zvigadzirwa zvinenge zvakabatana nemakinehydrates, mafuta, mapuroteni, mavitamini, mineral uye fiber fiber.
Muchikamu chepa pupa kana checoco, ndiyo nharaunda iyo yakanakisisa pupae ine chikafu. Mukadzi wechikadzi (cocoon) anorema pakati pe10% -15% inorema kupfuura varume.
Inogona kuchengetwa pamakamuri mashoma kwemavhiki mashoma, uye kana uchida kuwedzera hupenyu hwepaupa, unogona kuzvichengeta pamusana wekushisa kwe10-16 ° C.
Nzira yekubatanidza maggot kana pupa brood inogona kugadzirirwa mumudziyo uye inopa vhidhiyo sevharo.
Izvi zvinotevera kuenzanisa kwezvikamu zvishanu zvepasi zvakashandiswa sezviputi zvepaupa. kureva kusashandisa substrate, jecha, ivhu humus, sawdust.
Pupa ane ivhu uye sawdust substrate inokurumidza kupfuura pasi kana sawdust. Hatch inokurumidza kupfuura yose inonzi pupa iyo isina kupiwa bhandi (substrate)
Kupisa, yakanakisisa BSF inobhururuka hupenyu hupenyu pakati pezuva 8-11 uye 29-30 ° C. Kukura kweii mazai kutsika kunopfuura 30 ° C.
Zvokudya, Zviyero uye kukura kwemazai anobhururuka zvakanyanyiswa zvikuru nehuwandu hwehupa hwakapiwa. Izvo zvinowanikwa mumutsetse mune zvekudya, zvakanyanya BSF Lalt. Vice versa. Kushaya zvokudya zvinokonzera zvinokanganisa kukanganisa kana chiitiko chinowanzosanyanya mazai
Chiedza, chiedza chekudzivirira chakakosha pakugadzirwa kwezvipembenene zve BSF. BSF inoda nzvimbo dzakajeka
Mharidzo, Media nemishonga yakakosha yehutano yakananga zvakananga nehupamhi hwemagetsi. Ivanoshandiswa zvakanakisisa sevatatu M (maggot media magic), keki yemafuta yemichindwe (PKM).
Kusiyana BSF Murume uye BSF Mukadzi
Mumuviri wenyama inobhururuka iduku
Nyeredzi yemapapiro mapfupi shoma
Dumbu reMurume 3 chikamu chemuviri, uye 6 muvakadzi
Mimba ndeye murume asina kuchena uye mukadzi akajeka
Vanhurume havana mukomana wechirume zvepabonde
Kugadzira Maggot Matambudziko
Dambudziko guru mukugadzira kushandiswa kweBBF ndiBBA. Ngwarira nzira dzakanaka uye dzakarurama dzokurima kubva pakutanga.
Kana yako magog kukura kunhuhwa, iyi idambudziko guru. Kunze kwokusakanganisika nokuti kunhuwa kunogonawo kukokera zvikara zvinokonzera mhuka uye mapuropa akadai semakonzo, gorofu, mapepa, nyoka.
Mukuwedzera kune dambudziko, chikuru chinotyisidzira kukura kwemaggotti mhuri uye kuratidzwa kwezvakatipoteredza. Pakave nevarimi vazhinji vemajero avo vakamanikidzwa kuvhara nekuda kwekunhuhisa kunokonzerwa nemapuranga avo.
Imwe matambudziko makuru ndeyekukohwa kwakaderera kwemafuro uye hazvirevi kuti zvinowanikwa nguva dzose.
Kushandura kwemaggotti ekugadzirwa kwepamagetsi kunofanirwa kugovera masvosve eFF kana mazai anoramba aripo.
Mhinduro ndeyokuvaka BSF maggot kubva kumasikirwo sekuendeswa kwemazai nekushambadzira vachishandisa chimbo chakadai se biotong.
Kutengesa BSF kuisa mazai kunogona kushandisa zvidimbu zvekadhibhodi, mashizha emabhanki akaomeswa kana bhodhi rekutengesa pamabhuku ezvitoro kana mapepa.
Mhomho yakasvibirira inobhururuka inogona kubereka zvakanaka mukati megore munzvimbo dzinotonhora kana kune dzimwe nyika, asi mune dzimwe mamiriro okunze, matarita anodikanwa anodiwa kuti awane mazai munguva inotonhora.
Saka isu tiri kuIndonesia kana isu tirikugadzira uye takashinga, hatifaniri kunetseka pamusoro pechinetso ichi.
3. Kusaruramisa Kusarudza
Zvakashata pakusarudza rudzi rwebhururu uye maggot. Zvizhinji zvinokura maruva zvinokonzera maruva. Izvi zvinofanira kusimbiswa pakarepo.
Nokuti nhunzi dzinofanirwa kukurudzika dzinobva kumusiya wevarwi dzinobhururuka pane nzvimbo dzakasvibirira dzinobata zvirwere.
Kana ukamanikidzwa kutenga mbeu, tenga zvakakwirira BSF maggot mbeu kuitira kuti zvigumisiro zvigutse. Tenga kukunda maggot mbeu yeupenyu hwose.
Kana iwe uchitenga mbeu panguva dzose zvigumisiro hazvisimbiswi uye pakupedzisira unofanira kutenga uye kutenga zvakare.
Hatisi Bruce Lee
Usatenga maSBF mazai ayo anotengeswa nema gramu. Iwe unofanirwa kuziva mazai eBFF anotengeswa pamagiramu anoreva kuti iwe uri kutenga mazai akavhuniwa nokuti "anotsvaga" kubva panzvimbo yawakabva.
BSF mazai ayo akatemwa achaputswa. Saka iwe unotenga mazai akavhuniwa uye haazoputi.
Usingarevi kana uchitakura mazai aya akachengetwa zvisina hanya anoguma neBFF mazai aputsa uye haazoputi.
Mutengesi weBsf mazai kerok anoita seine nyanzvi kupfuura Bruce Lee anonyatsokwanisa kupwanya mazai asina kuputsika.
Mhinduro ndeyokutenga maBAFF mazai e "cluster" iyo ichiri kunyatsogadzikana sezvinoitwa nemafungiro emakumbo anoisa mazai avo.
Izvi ndezvekuita kuti mazai asakanganiswa uye asina kuputsika kuitira kuti mazai ose atenge pane mazai akavhuniwa.
4. Nzira Yakaipa
Ndiyo chirongwa chekudya chakakodzera nechinangwa chekuponesa 83%.
Kuti tibudirire izvi, tinoda kudzidza nzira yekugadzira maggot muhove yakagadziriswa uye huku hwekukuvadza iyo ndiyo nzira yakarurama.
5. Confused Marketing Marketing Maggot
Ndekupi kwamunoda kutengesa magog-magog kana kupiwa kwezvokudya kwako kwazadzikiswa. Ndekupi kwamunoda kutengesa maggot?
Mhinduro yedambudziko iri iri nyore nyore, iwe unongoda kuwedzera bhizinesi kana hove yebhizinesi.
Asi kana iwe usingakwanisi nekuda kwezvikonzero zvipi, saka unotanga kufunga pamusoro pekuenda kutengesa maggot?
Mhinduro yacho iri nyore, kutengesa maggot ako kuna Yurie BSF, iwe ikozvino unogamuchira maggot pamutengo weRp7.000 per kg.
Iyi mutengo yakakwirira kwazvo pamusoro pemusika unenge uri nepamusoro peRp4.000-Rp5.000 ne kg.
Yurie BSF inotenga nemutengo wakakura nokuda kwemagetsi ako nokuti tinoda kuti iite kuti ive yekudya kwezvipfuwo uye inoparidzirwa kune mamwe maguta e99 muIndonesia.
Kana iwe unofarira kuita zvese zvakananga purazi rekutsvaga mggot muguta rako, unogona kutarisa kero iri pawebsite ino kana kudana zvakananga kuna Ms. Yurie pa 0812-2105-2808.
6. Kwete kukura
Kuvandudza maggot business business. Zvinonzwisisika, kana pakutanga iwe unofunga nezvekugadzira maggot.
Nokuti kutanga, inongova nechinangwa chekuderedza mari yekudya kwemhuka. Sezvo nguva ichienderera mberi, unyanzvi hwako huchawedzera uye huwandu hwemaggotti huchawedzerwa zvakare.
Kune vamwe vanhu, zvechokwadi vanoda rubatsiro rwekuenderera mberi kukura. Nokudaro Yurie BSF inouya nehurongwa wekupa rubatsiro kune vose Yurie BSF shamwari dzeRp100.000.000 nemunhu uye zvechokwadi akafananidzirwa mune zvebhizimisi.
Chinodiwa kuti uwane mari iyi ndeyekuti unofanira kushingaira kutengesa maggot kuna Yurie BSF. Iyi mvumo inofanira kudzorerwa nekutumira maggot-magog ako kuna Yurie BSF.
Nhamba yemari yekubhadhara haisi pasi pechido zvachose. Hatibvumi RIBA. Chero zvakadini kukosha kworubatsiro rwedu rwatinopa, hakuna hutori hwekutora.
Ipapo iwewo unobhadhara iyo kukosha neMaggot.
7. Kwete kutungamirirwa
Mutariri wemunda anovimbisa kuti kukura kwako kunobatsira. Kutungamirirwa mumunda kunokosha zvikuru nokuti matambudziko aunosangana nawo mazuva ese ndeaya "akafanana" nezvinetso zvevarimi kune dzimwe nzvimbo.
Iyi ndiyo iyo purogiramu yeDUTA YURIE BSF inoshandisa purazi yako. Ipa nhungamiro yakananga maererano nemamiriro ezvinhu nemamiriro.
Neyeyi Yurio BSF purogiramu wenhume, iwe hauzombove uri woga. KUTI TINONYANYA KUTI TICHIYE nokudzidza zvatinonyanya kuonga kubatsira vamwe zvino kubudirira kunofanira kuuya.
8. Hakuchina guarantor
Zvatinoreva ndezvekutungamira kusvikira kukura kwemagetsi iwe kubudirira ndezvekuti kubudirire.
Zviuru zveYurie BSF shamwari kubvira pavaiziva 2007 vachiri pasi peHurie BSF. HAPANA ZVAKAWANDA RUPIAH FEES.
Haisi kurasikirwa here?
Hungu kwete, mutemo wedu kubudirira pamwe chete.Kana shamwari yaYuroe yakanakisisa ichinyatsobudirira ipapo migumisiro yemagogota ichazotengeswa kuna Yurie BSF. Zvinoreva kuti tinodirana.
Unogona sei kupa mhuka yekudya uye kuva chikamu chemusika wepasi rose? 2019 zvokudya zvekudya zvezvipfuwo zvinofungidzirwa kuti zvinopfuura 20-21 mamiriyoni emadhora ezvipfuwo. Mukana webhizimisi unobhadhara chaizvo.
Iyo Indonesian Maggot Cooperative ndeye nyika yeIndonesia, seyo hurukuro yepamutemo yekutenga maggot uye kutengesa uye imwe hupfumi hwebhizimisi.
Maggot uye Earthworm
Varimi vemizambiringa vanowanzowana mhangura panzvimbo yehonye yavo. Larvae ndiyo yakanakisisa pakushandura dhayi "yakakosha kwazvo" mumhuka yekudya.
Minyeji iri nani pakushandura yakakwirira cellulose zvishandiso (pepa, kadhibhodi, mashizha, mashizha emiti kunze kwehuni) muzvigadziriswe zvakanaka zvevhu.
Nyikaworms inokura zvakanaka pane zvakasara zvinokonzerwa nemapuranga anomhanyisa, asi mvura inokonzera ine enzyme uye inowanzove yakaoma zvikuru kune honye.
Larval basa rinogona kuchengeta kutonhora kwakapoteredza 37 ° C (100 ° F), apo minye inoda kutonhora kunotonhora.
Zvizhinji zvekuedza kuwedzera nhamba yakawanda yemaruva nehonye mune imwe chigadziko, panguva imwechete haina kubudirira.
Minoromi inogona kurarama pasi pemarara pakaderera pasi. Minhomba inogona kurarama mudengu risina tsvina apo nhamba yakawanda yemaruva isipo.
Minorinha inogona kuwedzerwa kana vanhu vakaremara vari kupera (munguva yechando) uye minye inogona kukwidzwa mudengu tsvina apo ichimirira mazai emhashu dzemauto emusango.
Sekudya, BSF mabuva haazivikanwi sepakati pemagadzirirwo emhonye inopisa iyo inobata shiri, asi minye mutsvuku inowanikwa kune mombe dzakawanda.
BSF Dambudziko reMaggot
KuWest Africa, Dirhinus giffardii yakawanikwa separasitoid kubva ku pupa H. inotyisa uye inoderedza mazai evha.
Izvo zvinoita kuti kuderedza mashizha kusvika ku72%. Izvi zvipembenene zvinotakurwa nemakumbo uye matanho ekuchengetedza anofanira kutorwa kuti zvidzivirire nzvimbo yekuwedzera yakasvibiswa kubva pakushungurudzwa kwewaini.
Nzira Yokukudziridza Maggot
Kune nzira dzakawanda dzekudziridza maggot. Mitambo yakasiyana-siyana inogona kushandiswa kubudisa maggots akadai semarara, tsvina uye manyore.
Chero nhepfenyuro inoshandiswa, sarudza mhizha iyo iri nyore kuwana uye "inosunungura".
Hazvikurudzirwi kushandisa mashizha kuburikidza nekutenga zvakadai sokushandisa bran.
Kukura kwebhandi yemagetsi maggot muwedzera kune mari inodhura yakagadzirwa yakagadzirwawo yakaderera. Nemhaka yokuti zvigunwe zvinowanikwa mubhangi zvakaderera.
Mhando dzeMaggot Kukura Media
Kukura kweMaggot Misiyuta Yokutsva Mhuka
Kukudziridza Utachiona Media Maggot
Zvokudya zveMaggot Kukura
Imwe nzira yekudziridza maggotti ndeyokushandisa mhuka yemombe.
Kukura kwegoroti nemiriwo yemvura inzira yakanaka yekubudisa yakawanda maggot pamari shoma.
Ndezvipi zvipfuwo zvinogona kushandiswa sechirongwa chekurima maggot.
Muchidimbu, zviyo zvose zvezvipfuwo zvinogona kushandiswa semagodhi yekurima mhizha. Saka hapana chikonzero chekutenga magog substrate cultivation media.
Mienzaniso yehutu hwemagetsi kuraira mhizha
Kukura kwegoggotti nemasvikiro anotangira kubva kumasipiresi eti tofu, kana kuti maruva emichindwe anokurudzirwa zvikuru nokuti kunze kwekubudisa mhando dzakanaka.
Uyewo sekuva sarudzo yekusvibisa tsvina ye tofu inokandirwa murwizi.
Saizvozvowo nemafuta emichindwe asina kushandiswa uye akarasa kunze kwemafuta emichindwe yemafuta. Kunyange zvazvo matope emichindwe emafuta ari akanaka kwazvo semhizha rekugadzira maggot.
Mienzaniso yekusvibiswa kwemagoguchi kudyara mhizha
Mafuta ePalm Palm
Dhiyabhorosi yakashata inetso yemazuva ano, uye iri kunamatira kwose kwose. Inogona kuva svikiro yekurima magog.
Kukura kwegoroti nemarara inoshandiswa zvinokurudzirwa zvikuru nokuti migumisiro yakanaka uye asingazivi inobatsira mukugadzirisa matambudziko emarara.
Dambudziko remarara ndiro dambudziko renyika, kwete muIndonesia chete.
Inova chinhu chinozvikudza zvikuru kana isu tiri imwe yenhengo duku kuti tibatsire kugadzirisa dambudziko iri nekushandisa tsvina iyi muzvinyorwa mukugadzira maggot.
Mukurima maggot zvishoma isu tichabudisa michina inogadzirwa nenzira ye
Maggot uye Yakashandurwa
KasGot (maggot aimbova) ishoma-duku (sejecha) tsvina kubva pamaggot ukuru hwemugunhi wokutanga. KasGot inobva pakudya kwezvokudya izvo zvinodyiwa nemagetsi uye zvinokandwa mukati memaggot rectum.
Izvi zvinonzi vermicomposting. Unhu hwechirwere hunonyanya kuvimba nehutori hwekuchengetedza maggot. Kasgot hazvibvi pamhando yemhando yehupenyu iyo inopedza.
Kasgot ine macro uye michina michina uye mavitamini. Kasgot yakanaka kwazvo pakuvandudza ivhu revhu, kukura nekugadzirwa kwemichero yemichero nemashizha.
Kasgot fertilizer ine yeinin iyo inoshandiswa kukurudzira kukura kwemiti midzi. Uye iyi inhau dzakanaka kune varimi nokuti yakaratidza kuti inoshanda zvikuru mukuvandudza kunaka kwekugadzira mashizha nemichero yemichero.
Kasgot yakafuma muzvinhu zveHara
Kasgot yakagadzirwa kubva pamagetsi ekugadzira muviri kana vermicompost inopfuma kwazvo muzvinhu zvinodiwa kuti ivhu ribereke.
Kasgot ine mishonga yakakwana (macro uye micro chemistry). Muchigadziriswa, chakatoitika kaviri kuparara kwehutano hwehupenyu.
Chokutanga, kukosha kwebhakitiriya usati wagodya maggot. Chechipiri, iyo inogadzirwa nemaggot pachayo, iyo iyo iyo nyaya inenge iri mudumbu remagetsi.
Izvo zvino zvinotanga kukura kuburikidza nehutachiona hwemagetsi. Nokudaro, maggot anozivikanwa senjini inosvibisa.
Icho chemakemikari zviri mumakassava akazvigadzirira kuvharirwa nemiti uye cassava ine microbes uye kukura kwekurima kukurudzira mahomoni, saka vanogona kubatsira mukukura kwekurima nokukurumidza.
Nhamba huru yemakiromita ari mumakassava anoita kuti kukurumidza kubudiswa kwezvibereko mumhando dzinodiwa nemiti.
Kuenzanisa N, P, K POC KasGot (Maggot Akashandiswa)
3 Cow manyore 0,96 0,68 1,68
4 Ngarava yemabhiza 0,49 0,73 0,83
5 Chicken Manyore 2,72 6,32 2,03
6 Dhonzi matonho 0,84 1,81 0,42
7 Goi Manure 0,61 0,31 0,18
8 Nguruve manyowa 1,24 1,83 0,74
Zvinyoro zvinokonzerwa nemagetsi zvinoenderana nemugove wekudya unopiwa magog.
Izvo zvakasiyana zvakasiyana-siyana zvekudya, izvo zvakasiyana zvakasiyana-siyana zvekudya zvine utachiona. Asi kazhinji zvigadziriswa zvehutano zvehupomberi zvinotevera:
Mhangura (Cu) 17,58%
41,23% uye mvura yekudzivirira simba
Kubatsira kweKaskerti Fertilizer
Hazvibatsiri nokuti zvinoshandiswa zvinogadzira manyowa zvinoshandiswa zvinokonzerwa nehupenyu izvo zvakatipoteredza.
Cashmere fertilizer haina kukuvadza ivhu nokuti harina makemikari. Izvi zvinokonzera mhaswa inoshandiswa inogona kushandiswa nguva dzose uye haikonzerisi migumisiro yakaipa yevhu kana mbeu.
Kasgot Fertilizer Kurasikirwa
Kubudirira kwezvirimwa hazvikurumidzi sezvinoita inorganic fertilizer. Nokuti chikoro chinokonzerwa nemafuta chinowanzoitwa.
Inobatsira kudyara mbeu uye kukura kwezvirimwa zvekugadzira michero, miriwo nemichero. Inobatsira kuvandudza maitiro emiti kuti ave akawandisa.
Flower ruvara, ruvara uye kumira zvakanaka zviri nani. Kasgot rakanaka kwazvo sekusanganiswa kwekuwedzera mhizha munharaunda.
Iine mahomoni kuti avandudze ivhu, chimiki uye biological properties. Yakachengeteka kushandiswa munguva yakareba nokuti pasina makemikari.
Chikonzero Chekushandiswa kweMasanganisi Makasanganisi
Kasgotti yemuori wehari 1kg cassava yakasanganiswa nevhu 3kg, asi kune nyika huru 6-10 kg cassava imwe 10m2
Urefu hwemassava hunobva kune rudzi rwemiti uye chiyero chekuberekwa kwevhu kunobatanidzwa.
Kubudirira kwemagetsi mvura inosanganisa fertilizer (POC) ndeyokuti inowedzera nitrogen, phosphorus, potasium uye mvura yehuyu, inosanganisira kukura uye inogona kudzivirira kuuya kwemarudzi akasiyana-siyana emichero.
Chimiro uye mararamiro emvura yakasimwa mbeu
Maggot mvura inogadzirwa nemafuta inofanira kuwedzera. Nemhaka yokuti uyo anokanganisa achachengeterwa kwenguva yakareba mune zvenhau, shandisa mutsinye wakasimba.
Kunyange zvazvo chikafu chemvura yakasvibirira inogadzirwa nemumanyorera inowanzoita kuti mvura isvike uye inoputika.
Asi kune zvakanakira zvakasiyana paunenge uchishandisa POC maggot iyo iri nyore kucheka nemashizha nemichero yemichero uye inoshumira semutsigiri wezvibereko uye kukura kwembeu.
Kunyanya apo mashizha nemichero zvinotanga kukura. Maggot POC yakanaka nokuti inokwanisa kunyatsopindira kuburikidza ne stomata kana pores.
Kupa POC Maggot inofanira kutarisa kuyerwa kwemaji kuitira kuti usanyanya kuderedza uye kuisa rufu mumiti.
Zvirimwa pavhareji zvinogona kunwa mishonga kwete kupfuura 2% pazuva.
Nhamba yekushandiswa kwePOC Maggot
Wedzera POC nemvura yakachena. Mushure mekusanganiswa mvura itsva inoshandiswa, majekiseni haasi kupfuura 2% kana kuti yega 1 imwe yePOC maggot yakakanyiwa ne 100 maita emvura.
Tsvina panguva yechikamu chekuchinja kubva kune zvinomera kusvika pakubereka izvo zvinobereka michero, mbeu kana tubers.
Rongedza kutungamirirwa kwePOC maggot kamwe kamwe pavhiki munguva yemvura. Apo nguva yacho inotanga, tsvina chero 3 kamwe kamwe pazuva nokuti POC inoparadzwa nemvura inonaya.
Nhamba yePOC maggot inofanira kuchinjwa kune rudzi rwemiti inopiwa POC maggot.
Zvigadzirwa mumhando ye preppa kana maggot maruva zvinofanira kutanga kushandiswa pakugadzirira zvakasiyana-siyana.
Izvi zvinowedzera kuwedzerwa kwezvibereko zvinogona kuchengetwa kwenguva yakareba. Uye yakashandiswa kana ichidiwa.
Ko Maggot inogona kushandiswa kumhuka yekufudza here? Chimwe chezvibereko mumaggotti mapuroteni,
Uye puroteni ino inodiwa nemhuka dzose uye kunyange vanhu. Saka mhuka ipi inogona kupiwa maggot. Mhinduro ndeyezvipfuwo zvose zvinoda mapuroteni emhuka.
Zvakangoita kuti mapuroteni anodiwa nemhuka imwe neimwe yakasiyana. Saka mhinduro ndeyokugadzira maggot muzvigadzirwa zvakasiyana-siyana kutanga.
Iipi mapuroteni mazinga anotarirwa maererano nezvinodiwa zvemhuka.
Maggot akanaka kune shiri yekudya
Maggot akanaka kuna Bangkok chicken feed
Wido Chicken kana Jalak
Maggot Akanaka Kwawo Nyundo Chiku Animal Animal
Polish Chicken kana Poland
Maggot Akanaka KwaMagung Chicken Animal Feed
Maggot Akanaka yeBrailer Animal Feed
Maggot akanaka kuti utakure huku
Maggot Akanaka KwaKudya Kakawanda
Pearl Catfish Mombe
Maggot akanaka kuti tilapia kudya
Ndapota Chipa Chipo
Maggot Akanaka Kwokudya Kwemhou dzeKork
Maggot Akanaka KwaDuck Animal Feed
Mojosari female duck mombe
Cirebon Duck Kana Rambon
Maggot Akanaka Kwa Reptile Animal Feed
Maggot Akanaka KwaArowana Animal Feed
Maggot Akanaka KwaKoi Animal Feed
Unoda Kudzidza Kuita
Tarisa 99 Nzvimbo yeRwendo